अत्याधिक आलोचना पश्चात लुकाकुले मागे माफी
Optimus Prime January 5, 2022
हाम्रो नेपाल स्पोर्ट्स, काठमाडौं| रोमेलु लुकाकुले गत हप्ता जारी गरेको विवादास्पद अन्तर्वार्ताका लागि चेल्सीमा संलग्न सबैसँग माफी मागेका छन् ।
इटालियन प्रेसमा गरिएका टिप्पणीहरूको सजायको रूपमा लिभरपुलसँग २-२ को बराबरीमा आइतवार चेल्सीको प्रिमियर लिग टोलीबाट लुकाकु बाहिरिएका थिए।
व्यापक छलफलमा लुकाकुले चेल्सीको अवस्थाबाट आफू धेरै खुसी नभएको र कुनै दिन इन्टरमा फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका थिए।
घटना पछि बेल्जियमका अन्तर्राष्ट्रिय फरवार्ड स्ट्यामफोर्ड ब्रिजबाट प्रतिष्थापन हुन सक्ने आंकलन गरिएको थियो।
तर टुचेलले लुकाकु अघिल्लो दिनको वार्ता पछि मंगलबार प्रशिक्षणमा फर्केको पुष्टि गरेका छन।
लुकाकु अहिले यो विषयलाई एकतर्फी बनाउने प्रयासमा सार्वजनिक रुपमा सम्बोधन गर्न बाहिरिएका छन् ।
चेल्सीको वेबसाइटमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, ‘प्रशंसकहरूका लागि म दुखी छु।”
“सबैलाई थाहा छ कि मेरो किशोरावस्थादेखि नै यस क्लबसँग मेरो सम्बन्ध थियो, त्यसैले म तपाईहरू निराश हुनुहुन्छ भनेर पूर्ण रूपमा बुझ्छु।
“स्पष्ट रूपमा अब तपाईंको विश्वास पुनर्स्थापित गर्ने मेरो हातमा छ, र हरेक दिन म प्रशिक्षण मैदानमा र खेलहरूमा हामीलाई जित्न मद्दत गर्ने प्रयास गर्नेछु।”
स्ट्राइकरको टिप्पणीलाई समग्र इन्टर र चेल्सी समर्थकहरुले नकारात्मक प्रतिक्रियाबाट हेरेका थिए। उनले त्यसमा झन् स्पस्ट पार्न खोजेका छन्।
“अन्तर्वार्ता इन्टर फ्यानहरूलाई अलविदा भन्नको बारेमा थियो, यो [चेल्सी] फ्यानहरू र फुटबल क्लब, मालिक, मेरो टोलीका साथीहरू र प्रबन्धकको अनादर गर्ने प्रयासको बारेमा थिएन।
“उनीहरूले मलाई यहाँ फिर्ता ल्याउन धेरै प्रयास गरे र म यहाँ फर्कन चाहन्थे। म गएदेखि नै मिशनमा छु।
“उनीहरूले [प्रशंसकहरूले] [मेरो प्रतिबद्धता]माथि प्रश्न उठाउनु पर्दैन। मैले सधैं भनेको थिएँ कि म यहाँ आउन चाहन्छु र सफल हुन चाहन्छु, त्यसैले मैले पाँच वर्षको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरें। मलाई लाग्छ चेल्सी सफलता बराबरको क्लब हो।
“यहाँ आउने सबै खेलाडीहरू जित्नका लागि आउँछन् र मलाई यो क्लबको लागि विशेष जोश छ। म यो क्लबबाट त्यो हासिल गर्न चाहन्छु, म धेरै वर्षदेखि यहाँ जित्न चाहन्छु। म हरेक दिन मेरो प्रतिबद्धता देखाउन चाहन्छु।” उनले बताए।
Posted in अन्तरष्ट्रिय फुटबल, फुटबलTagged #chelsea #hamro nepal sports #Lukaku #premier league
मेस्सी र बार्सिलोनाको सम्झौतामा गम्भीर समस्या, मेस्सीले बार्सिलोना छोड्दै !!
मेस्सीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा अर्जेन्टिनाको बिशाल जित !!!
बुन्डेस्लिगा : पहिलो खेलमा बायर्न म्युनिक बराबरीमा रोकियो !!
अन्तरास्ट्रिय ब्रेक पछि युरोपका लिगहरु पुनः सुचारु हुँदै (तालिका सहित)
घरेलु फुटबलमा थेग्नै नसकिने म्यानचेस्टर सिटि
लेवनडोस्की चम्किदा बायर्न म्युनिकद्वारा बार्सिलोना पराजित !!